【 အလှအပနှငျ့ ကနျြးမာရေး 】 မကျြကွညျလှာတှငျ အဆီမြား (lipid deposits) စုပုံလာခွငျး | Opinion Leaders
【 အလှအပနှငျ့ ကနျြးမာရေး 】 မကျြကွညျလှာတှငျ အဆီမြား (lipid deposits) စုပုံလာခွငျး
Arcus senilis သညျ အသကျအရှယျကွီးရငျ့မှု (အသကျ ၈၀ ကြျောသူ အားလုံးနီးပါးနှငျ့ အသကျ ၆၀ ကြျောသူမြား၏ ၆၀ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့ အထိ) နှငျ့ ဆကျစပျဖွဈပျေါသော မကျြလုံးလက်ခဏာရပျတဈခု ဖွဈပါသညျ။အသကျ ၄၀ အောကျတှငျ ဖွဈပှားပါက Arcus Juvenilis ဟု ချေါပါတယျ။တခြို့တှငျ မှေးဖှားစဉျကတညျးကပငျ တှမွေ့ငျရတတျသျောလညျး ၎င်းငျးဖွဈစဉျသညျ အလှနျရှားပါးသော အခွအေနတေဈရပျ ဖွဈပါသညျ။
မကျြကွညျလှာတှငျ အဆီမြား(lipid deposits) စုပုံလာခွငျးကွောငျ့ဟု ယဘေူယြ ကောကျခကျြ ခနြိုငျပါသညျ။
အသကျအရှယျကွီးရငျ့လာသညျနှငျ့အမြှ အတှရေ့မြားသော လက်ခဏာတဈရပျဖွဈပွီး အသကျကွီးပိုငျးတှငျ ၎င်းငျးလက်ခဏာတဈခုတညျး တှရှေိ့ရပါက အထူးစိုးရိမျစရာ မလိုအပျဟု ယဘေူယအြားဖွငျ့ မှတျယူနိုငျပါသညျ။
သို့သျော အသကျ၄၀အောကျလူမြားတှငျ တှရှေိ့ရပါက သှေးအတှငျး ကိုလကျစရောမြားခွငျး (hypercholesterolemia)နှငျ့ ဆကျနှယျ၍ ဖွဈပှားတတျသဖွငျ့ သှေးအတှငျး အဆီမြားခွငျးရှိ၊မရှိ စမျးသပျစဈဆေးရနျ အထူးလိုအပျပါသညျ။
အသကျ၄၀အောကျ ဖွဈပှားသူမြား၏ အခြို့တှငျ မြိုးရိုးလိုကျဖွဈပှားသော Familial Hyperlipidemia (FH)နှငျ့ ဆကျနှယျ ဖွဈပှားတတျပါသညျ။ ၎င်းငျးအခွအေနတှေငျ သှေးအတှငျး ကိုလကျစရော (Cholesterol) သို့မဟုတျ အခွားအဆီတမြိုး (Triglyceride) လှနျစှာမြားပွား နလေရှေိ့ပွီး လဖွေတျခွငျး၊ နှလုံးထိခိုကျခွငျးအထိ ဆိုးရှားနိုငျ၍ အသကျအန်တရာယျပါ စိုးရိမျရသော အခွအေနထေိ ဖွဈနိုငျခရြှေိပါသညျ။
ထို့ကွောငျ့ အထူးသဖွငျ့ အသကျ၄၀အောကျတှငျ ၎င်းငျးလက်ခဏာရပျကို တှရှေိ့ရပါက သှေးအတှငျး အဆီမြားခွငျး ရှိ၊မရှိသခြောအောငျ စမျးသပျစဈဆေးပွီး ထိရောကျသော ကုသမှုကို ဆောလငျြစှာ ခံယူသငျ့ပါသညျ။
သှေးတှငျးအဆီစဈတာကို fasting lipid profile ချေါတယျ။ စဈတဲ့အခါ အနညျးဆုံး ၉-၁၂နာရီ အစာမစားပဲစဈရတယျ။ ည ၁၀နာရီနောကျပိုငျး ဘာမှမစားပဲ မနကျစောစော စဈရတယျ။ စဈတဲ့အခါ အဆီအမြိုးအစားလေးမြိုးကို စဈပါတယျ။ total cholesterol , LDL , HDL , triglyceride စတဲ့ အဆီတှေ ပါဝငျတယျ။ အဆီပမာဏပျေါမူတညျပွီး ဆေးပေးလရှေိ့ပါတယျ။ သိပျမဆိုးတဲ့သူတှမှော နထေိုငျစားသာကျပုံပွောငျးလဲရုံနဲ့ရတယျ။
1. LDL Cholesterol (ကိုလကျစထော) အဆိုး
• Less than 100 mg/dL = အကောငျးဆုံး၊
• 130 – 159 mg/dL = အကောငျး-အဆိုးကွား၊
• 160 – 189 mg/dL = မွငျ့နေ၊
• 190 mg/dL and above = အတျောမွငျ့နေ။
2. HDL Cholesterol (ကိုလကျစထော) အကောငျး
• 60 mg/dLနဲ့ အထကျ ရှိသငျ့တယျ၊
• ယောကျြားတှမှော 40 mg/dLထကျနညျးပွီး၊
• မိနျမတှမှော 50 mg/dL ထကျနညျးနရေငျ နှလုံးရောဂါဖွဈလာမှာစိုးရတယျ၊
• 60mg/dL ထကျမြားရငျ နှလုံးရောဂါကိုကာကှယျရာကတြယျ။
• 150 mg/dL ထကျနညျးတာပုံမှနျ၊
• 150 – 199 mg/dL နညျးနညျးမြားတယျ၊
• 200 – 499 mg/dL မြားတယျ၊
• 500 mg/dL or higher အလှနျမြားတယျ။
4. Total Cholesterol (ကိုလကျစထော) စုစုပေါငျး
• 200 mg/dL ထကျနညျးနတောကောငျးတယျ၊
• 200 – 239 mg/dL နညျးနညျးမြားတယျ၊
• 240 mg/dL နဲ့အထကျ မြားတယျ။
သှေးအတှငျးအဆီမြားခွငျးနှငျ့ ဆကျနှယျဖွဈပျေါနပေါက သကျဆိုငျရာ အထူးကုဆရာဝနျမြားနှငျ့ ပွသပွီး
Statins ဆေးကိုအမြားဆုံးသုံးတယျ။ ဆေးကွောငျ့ ဗိုကျနာ၊ လပှေ၊ ဗိုကျနာ၊ ဗိုကျအောငျ့၊ ဝမျးခြုပျ၊ အသညျးထိခိုကျ၊ ကွှကျသားတှနော၊ အားယုတျတာတှေ ဖွဈစနေိုငျတယျ။
Fibrates ဆေးက Triglyceride ကစြတေယျ။ ဒီဆေးကွောငျ့ ဝမျးပကျြ၊ ဗိုကျနာ၊ သညျးခွကြေောကျတညျ၊ သှေးအားနညျး၊ သှေးကြဲဆေးတှကေိုပိုအားပေးတာတှေ ဖွဈစနေိုငျတယျ။
- သှေးအတှငျး အဆီမြားခွငျး၏ နောကျဆကျတှဲ ရောဂါမြားကို ထိရောကျဆောလငျြစှာ ကုသခွငျးတို့ဖွငျ့ ကနျြးမာပြျောရှငျသော ဘဝကို ရရှိခံစားနိုငျကွမညျ ဖွဈပါသညျ။
Arcus senilis သည် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှု (အသက် ၈၀ ကျော်သူ အားလုံးနီးပါးနှင့် အသက် ၆၀ ကျော်သူများ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် အထိ) နှင့် ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်သော မျက်လုံးလက္ခဏာရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။အသက် ၄၀ အောက်တွင် ဖြစ်ပွားပါက Arcus Juvenilis ဟု ခေါ်ပါတယ်။တချို့တွင် မွေးဖွားစဉ်ကတည်းကပင် တွေ့မြင်ရတတ်သော်လည်း ၎င်းဖြစ်စဉ်သည် အလွန်ရှားပါးသော အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။
မျက်ကြည်လွှာတွင် အဆီများ(lipid deposits) စုပုံလာခြင်းကြောင့်ဟု ယေဘူယျ ကောက်ချက် ချနိုင်ပါသည်။
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာသည်နှင့်အမျှ အတွေ့ရများသော လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး အသက်ကြီးပိုင်းတွင် ၎င်းလက္ခဏာတစ်ခုတည်း တွေ့ရှိရပါက အထူးစိုးရိမ်စရာ မလိုအပ်ဟု ယေဘူယျအားဖြင့် မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။
သို့သော် အသက်၄၀အောက်လူများတွင် တွေ့ရှိရပါက သွေးအတွင်း ကိုလက်စရောများခြင်း (hypercholesterolemia)နှင့် ဆက်နွယ်၍ ဖြစ်ပွားတတ်သဖြင့် သွေးအတွင်း အဆီများခြင်းရှိ၊မရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။
အသက်၄၀အောက် ဖြစ်ပွားသူများ၏ အချို့တွင် မျိုးရိုးလိုက်ဖြစ်ပွားသော Familial Hyperlipidemia (FH)နှင့် ဆက်နွယ် ဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။ ၎င်းအခြေအနေတွင် သွေးအတွင်း ကိုလက်စရော (Cholesterol) သို့မဟုတ် အခြားအဆီတမျိုး (Triglyceride) လွန်စွာများပြား နေလေ့ရှိပြီး လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးထိခိုက်ခြင်းအထိ ဆိုးရွားနိုင်၍ အသက်အန္တရာယ်ပါ စိုးရိမ်ရသော အခြေအနေထိ ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် အထူးသဖြင့် အသက်၄၀အောက်တွင် ၎င်းလက္ခဏာရပ်ကို တွေ့ရှိရပါက သွေးအတွင်း အဆီများခြင်း ရှိ၊မရှိသေချာအောင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး ထိရောက်သော ကုသမှုကို ဆောလျင်စွာ ခံယူသင့်ပါသည်။
သွေးတွင်းအဆီစစ်တာကို fasting lipid profile ခေါ်တယ်။ စစ်တဲ့အခါ အနည်းဆုံး ၉-၁၂နာရီ အစာမစားပဲစစ်ရတယ်။ ည ၁၀နာရီနောက်ပိုင်း ဘာမှမစားပဲ မနက်စောစော စစ်ရတယ်။ စစ်တဲ့အခါ အဆီအမျိုးအစားလေးမျိုးကို စစ်ပါတယ်။ total cholesterol , LDL , HDL , triglyceride စတဲ့ အဆီတွေ ပါဝင်တယ်။ အဆီပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး ဆေးပေးလေ့ရှိပါတယ်။ သိပ်မဆိုးတဲ့သူတွေမှာ နေထိုင်စားသာက်ပုံပြောင်းလဲရုံနဲ့ရတယ်။
1. LDL Cholesterol (ကိုလက်စထော) အဆိုး
• Less than 100 mg/dL = အကောင်းဆုံး၊
• 160 – 189 mg/dL = မြင့်နေ၊
• 190 mg/dL and above = အတော်မြင့်နေ။
• 60 mg/dLနဲ့ အထက် ရှိသင့်တယ်၊
• ယောက်ျားတွေမှာ 40 mg/dLထက်နည်းပြီး၊
• မိန်မတွေမှာ 50 mg/dL ထက်နည်းနေရင် နှလုံးရောဂါဖြစ်လာမှာစိုးရတယ်၊
• 60mg/dL ထက်များရင် နှလုံးရောဂါကိုကာကွယ်ရာကျတယ်။
• 150 mg/dL ထက်နည်းတာပုံမှန်၊
သွေးအတွင်းအဆီများခြင်းနှင့် ဆက်နွယ်ဖြစ်ပေါ်နေပါက သက်ဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်များနှင့် ပြသပြီး
Statins ဆေးကိုအများဆုံးသုံးတယ်။ ဆေးကြောင့် ဗိုက်နာ၊ လေပွ၊ ဗိုက်နာ၊ ဗိုက်အောင့်၊ ဝမ်းချုပ်၊ အသည်းထိခိုက်၊ ကြွက်သားတွေနာ၊ အားယုတ်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
Fibrates ဆေးက Triglyceride ကျစေတယ်။ ဒီဆေးကြောင့် ဝမ်းပျက်၊ ဗိုက်နာ၊ သည်းခြေကျောက်တည်၊ သွေးအားနည်း၊ သွေးကျဲဆေးတွေကိုပိုအားပေးတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
- သွေးအတွင်း အဆီများခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါများကို ထိရောက်ဆောလျင်စွာ ကုသခြင်းတို့ဖြင့် ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော ဘဝကို ရရှိခံစားနိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။